Obi ụtọ na Valentines Day 2018 Pictures Quotes SMS Cards Wallpapers & Ịtọ oge
maka enyi nwoke
N'ihi Girl Enyi
n'ihi na Nwunye
n'ihi na Nna
gwa Abigel Day 8 Feb
egwuregwu Day 10 Feb
nkwa Day 11 Feb
amakụ Day 12 Feb
agaghịkwa Day 16 Feb
senti Day 17 Feb
achụ nwoke Day 18 Feb
efu Day 20 Feb
Obi ụtọ na Valentines ụbọchị bụ na-atụ na 14 February 2018. Ọ bụrụ na onye kpebie Ɛpo Day 2018 dị ka ụbọchị na nke ịhụnanya na-eme ememe na Ụbọchị Valentine kaadị Ụbọchị Valentine onyinye na Ụbọchị Valentine oyiyi, Ụbọchị Valentine akwụkwọ ahụ aja na obi ụtọ Valentines ụbọchị SMS.
Ga Ɛpo Day mere adịghị abụ ụbọchị ememe maka ndị ọzọ karịa nnọọ sweethearts?
"N'ezie anyị na-enwe ịhụnanya na nza nke omenala na ebube, na ụdị ịhụnanya na ọkụ na a onye a nọ ndụ, ọ bụghị mgbe niile nke di na nwunye ahụ n'anya "na-akasị na-eme ememe na ụbọchị Valentine. A edemede kwuru. "Anyị mainstream omenala bụ jupụtara na ịhụnanya nwoke na nwaanyị. Karịsịa na pop na film music site atụmanya na ịhụnanya, a ga-emezu n'ime nke a kpuchie. Anyị gosiri n'ụzọ dị ukwuu n'ihi na ndị ọzọ ụdị, na ọ na-eme anyị ìsì ka ụdị ndị ọzọ nke ịhụnanya, "Na-akọwa Jens W. Pedersen, na-eche na ọ dị mkpa ka na-n'uche na ịhụnanya nwere ike chọọ na ahụmahụ n'ụzọ ndị ọzọ:"Ịhụnanya dị otú ahụ dị ka nwere ike ịbụ ihe ime mmụọ, a ịhụnanya ndụ n'onwe ya, na ezinụlọ ma ọ bụ enyi "
Ọtụtụ na-amụ banyere obi ụtọ Valentines ụbọchị 2018 weere ya na ọ bụ onye nchụàjà na-na-emegide Eze Ukwu Rom bụ Klọdiọs II onye iwu eto eto ndị ikom a na-òtù ezinụlọ ha mgbe ha na-agha. Onye nchụàjà St. Valentine wee na ịlụ di na nwunye na e mesịrị gburu na-aga site na eze ukwu ahụ iwu.
Ihe ịrụ on Obi ụtọ na Valentines Day 2018 With Your Valentine.
Dee a na-ekpo ọkụ ịhụnanya ozi
N'ọtụtụ mmekọrịta, e nwere fọrọ oge na-agwa onye ọ bụla ọzọ banyere ihe niile anyị na-n'anya banyere onye ọ bụla ọzọ na ndụ anyị ọnụ. Wepụta oge verbalize gị ịhụnanya na obi ụtọ, na ide a ịhụnanya akwụkwọ ozi gị girl enyi ma ọ bụ nwunye na obi ụtọ Valentines ụbọchị 2018.
Cultural Ahụmahụ na gị Valentines
Nnwekọrịta Ahụmahụ jikọtara anyị ọnụ na-aghọwo isi nkuku nke mmekọrịta. Iju ya / ya na tiketi ka a ndụ egwu, nkiri, opera ma ọ bụ a mma nkiri.
Hazie Picnic On The Living Room Ft
Ndisuan a picnic blanket na ndụ ụlọ n'ala, ebe nza nke rọrọ cushions na cushions, na-enwe tapas nakwa dị ka ndị ọzọ pụrụ iche ọnụ. Server-enwe obi ụtọ na uda di iche iche dị ka chili, ginger, galiki, vanilla na pepemint. Ha nwere, dị ka ọchịchịrị chocolate, black ginger, ahuekere butter na almọnd, reputed dịkwuo ike. Ose elu na oysters, ọhụrụ mkpụrụ fig, unere, ube bekee na ndị ọzọ ọnọdụ nke nwere ike ime ka erotic mkpakọrịta.
Okooko osisi gị Valentines
'Sịnụ ya okooko osisi'. Lelee okooko si uru tupu ị na-ahọrọ ndị bouquet gị Valentine 2018.
Valentine nri abalị
Esi nri ya / ya mmasị menu. Mee chiri anya na mma ikuku na a ukwuu nke kandụl, okooko osisi, music na tablecloth na table.
Inye Ya / ya Ụkwụ ịhịa aka
Bụ ihe akpan akpan na-akpachi anya site n'inye ihe na-na ụkwụ ịhịa aka n'ahụ? Ikekwe n'ihi na mkpịsị ụkwụ na-adịkarịghị isiokwu nke na-ahụ n'anya ntị, ikekwe n'ihi na ọtụtụ n'ime anyị na-a bit umeala mgbe ọ na-abịa ụkwụ anyị. Ma a ụkwụ ịhịa aka n'ahụ, a set nke na-ekpo ọkụ, n'anya aka, stroking na massaging ụkwụ, nwere ike obi site dum. Wepụta ụfọdụ ezigbo mmanụ, na na-na ọ dị mkpa. Ịhịa aka n'ahụ n'elu ya nkwonkwo ụkwụ na elbows.
Ọ bụ ọ dị mma ime mfegharị, ọbụna ma ọ bụrụ na i biri ndụ ọnụ a mmekọrịta ruo ọtụtụ iri afọ. Ụkwụ na flirting bụ ezi usoro aka ịmaliteghachi ịkụzi ihe ji na onye ọ bụla ọzọ. Achụ nwoke bụ a mara mma ụzọ gwa onye gị na ị na-enwe mmasị ya - na-enweghị i mkpa mgbe nile iji otu okwu.
Pịa n'okpuru njikọ locates ịtụnanya onyinye maka Ɛpo, eg: Obi ụtọ na Valentines Day Images, Pictures ,ozi, obi ụtọ Valentines Day videos, onyinye na ọtụtụ ndị ọzọ.
Valentine Day kedu ngwa Status 2018
Ɛpo ụbọchị Facebook DP
Ɛpo ụbọchị English SMS 2018
Ɛpo ụbọchị SMS 2018 maka na enyi nwanyị
Ɛpo ụbọchị SMS n'ihi na Enyi 2018
Ɛpo ụbọchị SMS maka di 2018
Ihunanya Quotes N'ihi Di na Images 2018
Valentine Day Foto Ozi 2018
Ɛpo ụbọchị Foto SMS 2018
Obi ụtọ na Ɛpo 's Day Bangla SMS 2018
Obi ụtọ na Valentines Day animated GIF 2018
Obi ụtọ na Valentines Day Alyce Lyrics 2018
Obi ụtọ na Valentines Day nkwusora 2018
Obi ụtọ na Valentines Day Onyinye 2018
Obi ụtọ na Valentines Day Cards 2018
Valentines Day Cards N'ihi ya 2018
Valentine Day Cards N'ihi enyi nwoke 2018
Ɛpo ụbọchị kaadị maka na enyi nwanyị 2018
Valentine Day Card Nke Nne 2018
Valentine Day Card Ọkpara 2018
Valentines Day kaadị maka Sister 2018
Valentines Day Cards N'ihi Sister Na Iwu
Valentines Day Cards N'ihi ụmụ klas 2018
Valentines Day Cards n'ihi na mama 2018
Valentines Day Cards N'ihi Nwunye 2018
Valentines Day Cards N'ihi nne na nna 2018
Valentines Day Cards N'ihi Friend 2018
Valentine Day na akwụkwọ ahụ aja 2018
Valentines Day na akwụkwọ ahụ aja na Quotes 2018
Valentine Day Wallpaper na Shayari 2018
Obi ụtọ na Valentines Day My Ịhụnanya 2018
Obi ụtọ na Valentines Day Na Na Na
Valentine Week List 2018, 7 Days of Obi ụtọ na Valentines Day AFỌ:
Ee anyị na-na-na-otu nzọụkwụ nso Obi ụtọ na Ɛpo ụbọchị 2018! Ɛpo ụbọchị bụ ma ama na kpọrọ onye ọ bụla akpan akpan oge anyị ịtụnanya na-echeta. Ọ bụ ụbọchị na-edebe ọkụ echeta ịhụnanya nke abụọ unidentified onye e mesịa ghọọ otu mkpụrụ obi. Ɛpo Day bụ nnọọ dị ka ngọpụ n'ụba ụfọdụ mmezi ịhụnanya na ihe ọzọ ihunanya na otu onye na onye ị na ike were ndụ gị ma ma ọ bụ ọ pụrụ isi ghọọ gị na mama ma ọ bụ papa dị ka anyị maara na anyị na mama na papa bụ mgbe anyị bụ isi n'anya. Ɛpo Day bụ nnọọ ụbọchị ọzọ n'ihi na ezi ndị hụrụ ndị na-eji ụbọchị ọ bụla ụtọ ha hụrụ ọbụna chịa ụbọchị tupu. Otú ọ dị, a Ɛpo ụbọchị na-eme ememe na ike nke ịhụnanya n'etiti mkpụrụ obi abụọ bụ onye gaara bulie na roughest ụbọchị nile nke ndụ ma ọ bụ na ha bụ ndị ọhụrụ na ịhụnanya na onye ọ bụla ọzọ ma ọ bụ ndị bụ ndị ezi mkpụrụ obi na di na nwunye ma ghara inwe ike ọnụ ndụ, Ɛpo ụbọchị bụ a mere onye ọ bụla nke na-na ịhụnanya na nwere flavor na sweetest nke ịhụnanya na chọrọ usọrọ ndụ iji ha akpan akpan onye.
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu banyere nke 14 nke February Ɛpo ụbọchị, e nwere zuru ezu pụrụ iche 7 ụbọchị maka ndị hụrụ na ọnwa nke February aka izu nke ịhụnanya na-mara dị ka Ɛpo ịhụnanya izu na February kpọmkwem ụbọchị nke na-emekarị na-amalite na Rose Day sochiri gwa Abigel Day emesia chocolate Day emesia egwuregwu Day ekemende sochiri Nkwa Day emesia mmakọ Day na ikpeazụ ma bụghị dịghị ihe ọzọ Kiss Day na ikpeazụ isi ụbọchị na-abịa Ɛpo Day. Iji ndị ikom na ndị inyom na-adịghị aghọta a 7 ụbọchị nke Ɛpo izu oge, N'ihi na ha na anyị na-mere ihe mgbalị ụbọchị mpempe akwụkwọ nke Ɛpo izu Days na kwesịrị ekwesị iji.
Valentine Week List 2018 Days Obi ụtọ na Valentines Day AFỌ:
Ɛpo Week Days Ụbọchị 2018 7 Days nke Ɛpo Week
7nke Feb 2018 (Wednesday) Rose Day (1st Day nke Ɛpo)
8nke Feb 2018 (Thursday) gwa Abigel Day (2nd Day nke Ɛpo)
9nke Feb 2018 (Friday) chocolate Day (3Rd Day nke Ɛpo)
10nke Feb 2018 (Saturday) egwuregwu Day (4nke Day nke Ɛpo)
11nke Feb 2018 (Sunday) nkwa Day (5nke Day nke Ɛpo)
12nke Feb 2018 (Monday) amakụ Day (6nke Day nke Ɛpo)
13nke Feb 2018 (Tuesday) Kiss Day (7nke Day nke Ɛpo)
14nke Feb 2018 (Wednesday) Ụbọchị Valentine (V-ụbọchị)
The Ɛpo izu ndepụta & ha ụbọchị mpempe akwụkwọ nwere onwe ha mkpa. Ka anyị imebiga ihe ókè eziokwu n'azụ ndị a dum Valentine ụbọchị izu ndepụta na ihe mere eme anyị na-agba a 7 ụbọchị nke Ɛpo.
7 Days of Valentine & Ihe Anyị Ime Banyere Nke a Days
Rose Day 2018: mere ihe nke di na nwunye ma na ha na-na na na di ma ọ bụ nwunye, enyi nwoke ma ọ bụ enyi nwanyị, bụ eziokwu na ọ n'egosi mmalite nke Ɛpo izu on 7 February. A mara mma rose e nyere na-egosipụta mmetụta nke ịhụnanya n'ebe onye ọzọ. Dị ka red na-ezo dị ka ihe nnọchianya nke ịhụnanya, ya mere, ka na-amalite izu site n'igosipụta ịhụnanya.
gwa Abigel Day 2018: Ọ bụ ụbọchị nke abụọ nke Ɛpo izu na a ụbọchị na-eme ememe na 8 February kemgbe nzọụkwụ ọzọ. N'ụbọchị a na enyi nwoke ma ọ bụ di na-atụ aro maka ha pụrụ iche na enyi nwanyị ma ọ bụ nwunye na ha nnọọ onwe okike & pụrụ iche style.
chocolate Day 2018: mgbe na-abịa na-esote ụbọchị nke Ɛpo izu-eme ememe na 9 February. Mgbe ọ na-ewe aro, na-esote ụbọchị na-akwanyere ya ùgwù site awụkwasị a ịhụnanya ya site n'inye ezigbo mma obi udi chọkọletị.
egwuregwu Day 2018: mgbe chocolate ụbọchị, ha ị ga egwuregwu ụbọchị na nke ahụ bụ nke anọ ụbọchị nke Ɛpo izu na dara na 10 February. Ihe kpatara nke a ụbọchị na-eme ememe dị ka otu n'ime ndị a na-egosipụta ịhụnanya ha na a mara mma egwuregwu.
nkwa Day 2018: Nkwa ụbọchị ndị a 11 February dị ka ọ bụ ise nke V. Week na a na ụbọchị ndị di na nwunye ji ịhụnanya ha ka onye ọ bụla ọzọ. Ụmụ okorobịa na-ekwe nkwa na-ebighi ebi ọnụ ụdị nkwa.
amakụ Day 2018: mgbe e mesịrị ekwe, ekemende abịa amakụ ụbọchị nke bụ n'ụbọchị nke isii nke Ɛpo izu 12 February. Dị ka aha ya na-akọwa, di na nwunye ndị dị mkpa ka tightly mmakọ onye ọ bụla ọzọ.
Kiss Day 2018: ebe a bụ nsusu ọnụ ụbọchị on 13 February na nke ahụ bụ ụbọchị nke asaa nke Ɛpo izu na ọ na-egosi na nke a ụbọchị ndị kasị mma ụbọchị ebe i nwere ike ịrịọ gị na mbụ nsusu ọnụ, ma ọ bụrụ na ị dị nnọọ gwa Abigel ya.
Obi ụtọ na Ɛpo Day 2018: n'ikpeazụ ndị dị ịrịba ama ahụ ruru na 14 February. Ọ bụ ihe kasị mma kasị pụrụ iche ụbọchị niile nke ndị hụrụ, di na nwunye na di na nwunye dị ka Valentine Day na-enye onye ọ bụla n'ime iji gosi na ha authentic ụdị ịhụnanya ka onye pụrụ iche.
Mgbe awụkwasị ịhụnanya maka a dum izu mgbe na-abịa isi akụkụ ndị na-ekweghị na ịhụnanya ma ọ bụ ndị ikom na ndị inyom bụ ndị na-eme ka fun nke ụbọchị Valentine ukwuu n'ime otu nke ndị mmadụ n'otu n'otu na ndị mgbochi mkpali nke ịhụnanya ma ọ bụ ndị na-adịghị enweta ụfọdụ mmadụ dị ka ha Ɛpo, na soro izu bụ ma ama dị ka mgbochi Valentine izu ma ọ bụ ọbụna kemmeochi Valentines ụbọchị aha.
Anti Ɛpo izu Day Ụbọchị Anti Ɛpo ụbọchị Week ndepụta 2018 Days of Anti Valentine
15nke Feb 2018 ụra Day Thursday
16nke Feb 2018 agaghịkwa Day Friday
17nke Feb 2018 senti Day Saturday
18nke Feb 2018 flirting Day Sunday
19nke Feb 2018 Confession Day Monday
20nke Feb 2018 efu Day Tuesday
21st Feb 2018 Gbasaa Wednesday
The mgbochi Ɛpo izu ma ọ bụ abụọ 7 Days Ịgbaso Ụbọchị Valentine nwere ụra ụbọchị on 15th February, agaghịkwa ụbọchị na 16thFebruary, senti ụbọchị on 17 February, achụ ụbọchị on 18 February, nkwupụta ụbọchị on 19 February, efu ụbọchị on 20 February na n'ikpeazụ ezumike on 21 February.
Ụbọchị Valentine a maara site na ụwa n'elu 14 February n'afọ ọ bụla. Ụbọchị Valentine na-eme ememe site onye ọ bụla anọwo na Ịhụnanya. Nke a ụbọchị bụ ma ama bụ otu n'ime ndị ntorobịa ahụ magburu onwe ọṅụ, ịnụ ọkụ n'obi na obi ụtọ. Valentines Week amalite site 7th February na-adịru ruo 14 February. Kwa ụbọchị nke Valentines Week na-eme ememe na a n'ụzọ pụrụ iche na-anọchite anya a ihe omume pụrụ iche na ike oké n'ịwa ahụ Valentine Week pụrụ iche ọ bụla conceivable n'ụzọ. All ndị na-na ịhụnanya na-echere maka ụbọchị taa ime ha hụrụ n'anya na-eme ka ha chee na ha pụrụ iche.
Ɛpo ụbọchị nke bụ n'ezie ndị kasị na-echere ụbọchị site ndị hụrụ niile gburugburu ụwa bụ ebe a na-abịa. Onye ọ bụla nke hụrụ na-echerekwa a ụbọchị dị ka nke a ụbọchị na-enye ha ihe ukara ohere egosipụta ịhụnanya ha ka ha anwụrụ. Ɛpo ụbọchị na bụ Olee ihe enyemaka 14 nke February kwa afo bu ụzọ na a Ɛpo izu. Ɛpo izu 2018 amalite site 7th feb. n'izu a si 7th na 14 na-ezo dị ka ịhụnanya izu ma ọ bụ ịhụnanya izu. The Valentine izu mpempe akwụkwọ na-amalite nke 7th Feb Wednesday malite na ụba ụbọchị. N'okpuru ebe a bụ zuru collection of Valentines izu ụbọchị 2018.
Valentine Week Days AFỌ 2018:
Rose ụbọchị na-akwanyere ya ùgwù site n'inye ọhịa ibe. Ọbụna ndị na-abịa na ịhụnanya na-enye red bilie ndị ha hụrụ n'anya. Ya ọ bụghị nanị ndị a ụbọchị kwesịrị naanị maka ndị hụrụ. Nke a ụbọchị kwesịrị gburugburu enyi. The naanị ihe dị iche na-na na-na niile coloration nke a na ụba. Ọ dara na 7th Feb na Olee ihe enyemaka 2018 ọ na-ada na ya bụ na Wednesday.
Ɛpo izu-amalite na Rose Day, dị ka okooko ga-maa kpam kpam kasị hụrụ n'anya item na-emekwa n'etiti ndị Roses bụ ka n'etiti ha mmasị nke ọ bụla onye na. Rose Day na-eme ememe na ọtụtụ nke ịnụ ọkụ n'obi na ịnụ ọkụ n'obi onye nke ụmụaka ndị na-agbalị iji gosi na ha hụrụ nanị site n'inye ụba. Ya mere, kwadebe eji a ubara na onyinye ya a ịhụnanya.
Na nke a na ụbọchị ọ bụ omume na-enye red odo pink Roses dị iche iche ndị mmadụ dabere n'elu onwe gị ka ha. Okooko osisi na-doro anya na ndị zuru kasị hụrụ n'anya ihe ẹdude n'ime a Roses bụ nanị otu n'ime ndị ọkacha mmasị.
Obi ụtọ gwa Abigel Day 2018:
obi ụtọ gwa Abigel ụbọchị 2018
On gwa Abigel ụbọchị ị ga-agakwuru gị anwụrụ na-agwa ha ihe i kweere ha ogologo. Ị na-egosi na onye ị hụrụ n'anya. Ọ bụ 2nd ụbọchị nke v ụbọchị izu. Amaghị ga-kere pụrụ iche site eburu n'uche ebe gburugburu, tinyere onyinye. Nke a dị mkpa ma ọ bụrụ na-ịchọrọ ị chọrọ ịlụ ya
Ha na-anọ na ha onwe ha na ikpere na na-ndokwa a mara mma ma na-akpachi anya na gburugburu ebe na-atụ aro ha hụrụ n'anya. Nke ahụ bụ mba predefined usoro na-egosi na gị onwe gị hụrụ n'anya. Ọ bụrụ na a ịhụnanya maka a bụ eziokwu mgbe ị na-aghọta ihe nwere ike ime ka ha n'ezie ụtọ na pụrụ iche. Ọ dịghị ihe dị nnọọ mkpa karị tụnyere a nnọọ ịhụnanya mkpụrụ obi, ọ bụghị ya.
Rose Day na-sochiworo anya site gwa Abigel Day na ọ bụ 2nd ụbọchị nke a Ɛpo izu. Na nke a na ụbọchị, ị ga na-edu gị ịhụnanya na-egosipụta onwe gị mmetụta kwupụta himor ya. Ya mere, kwadebe na a ika-ọhụrụ na anya na-ewetara a ịhụnanya a gwa Abigel ụbọchị.
Ibe anụ ma ọ bụ ụfọdụ ihe ndị ọzọ candies eji megharịa ọnụ enriches ụrà tinyere egwu àgwà. Na nke a na ụbọchị ị ga-achụsakwa obi ụtọ site na-eweta a mmasị chocolate gị ịhụnanya na-eme ka himor ya nnukwu.
Onye ọ bụla ọzọ nwere ihe ọ bụla dị iche iche na-amasị ka anya dị ka ọ na-abịa oke nke chọkọletị. Buru n'uche na mgbe ọ bụla ị na-enye chocolate ụfọdụ hụrụ n'anya ya kacha mma na-enye ha na chocolate ha na-amasị. site otú, ma ọ bụrụ na site ohere nke i nwere ike ikwu gị mmetụta gị n'ụzọ kwekọrọ nnọọ na-atụ aro ụbọchị, ekemende chocolate ụbọchị bụ gị kacha mma ụbọchị iji nweta na.
Onye ọ bụla hụrụ chocolate, ka ha chụọ ha ha mmasị ùkwù chocolate na ike ha nwee obi ụtọ.
Obi ụtọ na Chocolate Day 2018:
The chocolate ụbọchị nke Ɛpo izu bụ ma ama na 9 February nwekwara ọ dara n'elu Friday of 2018.
obi ụtọ chocolate ụbọchị 2018
Ị nwere ike na-ekesa ọṅụ na-enye chocolate n'ime a nke dị nso na ndị a hụrụ n'anya. Ke adianade ụfọdụ hụrụ n'anya na enyi nwanyị ma ọ bụ nne na nna ochie nwunye ma ọ bụ enyi nwoke ọ bụ omume na-enye pụrụ iche akwara obi ekara chọkọletị ọnụ na onyinye nke usoro.
Obi ụtọ na egwuregwu Day 2018:
About egwuregwu ụbọchị ndị echepụta onyinye ndị inyom ha a cute egwuregwu. Girls n'anya ndị a ihe ụmụaka ji egwuri egwu n'ezie nnọọ mma. S O na-esonụ a ole na ole uto nke chocolate, mgbe gifting a egwuregwu ga-eme ka gị na nwa agbọghọ ọbụna a otutu ihe obi ụtọ.
The egwuregwu ụbọchị bụ ma ama banyere 10th February plus ọ na usen on Saturday na 2018.
Teddies ga-abụ ihe kasị mara ezigbo mma onyinye-enye a hụrụ n'anya na onye. Ha na-mgbe ụfọdụ cuddled mgbe anyị na-atụ uche onye. Ha na-mgbe ụfọdụ kụrụ na ọ bụrụ na anyị anọwo na-ewe iwe ma na-anyị nwere ike eti mkpu obi anyị banyere ihe ndị a.
obi ụtọ egwuregwu ụbọchị 2018
Egwuregwu Day tụlee on February 10th, maka ụbọchị taa ịhụnanya nnụnụ n'ụwa nile na-ewetara ha ịhụnanya na niile mara ezigbo mma na-adọrọ mmasị teddies. Anyị niile bụ ndị maara na ụmụ agbọghọ na-adị nnọọ ele mmadụ anya n'ihu na egwuregwu bea na teddies bụ otu n'etiti ọtụtụ cutest onyinye ha ga-ọdịda ka a hụrụ n'anya na onye. Ugbu a ọ bụ oge na-enweta ndị na-eju ụbọchị ka ịgụ na teddies si Ɛpo.
Obi ụtọ na Nkwa Day 2018:
obi ụtọ nkwa ụbọchị 2018
Ha site nkwa ruru ha mmekọrịta ma na-agbalị tricky guzosie nkwa ha n'agbanyeghị ihe niile abịa banyere. Nke a bụ ihe kasị mma na nke kasị peculiar òkè nke mmekọrịta. Nke ahụ bụ ka anya dị ka otu ndị a hụrụ n'anya na-amalite-atụ anya eachother na ina malitere ịdabere n'elu eachother. Ha na-ekwe nkwa eachother iji nweta zuru ezu raara onwe. Ha na-ekwe nkwa na-anọ site na onye ọ bụla ọzọ n'aka irrespective otú njọ na ọnọdụ bụ.
Na-eme ka nkwa bụ mgbalị ma-edebe ndị a nkwa siri ike. N'ezie mmekọrịta bụ ma ọ bụrụ na ndị a nọgide na-enwe nkwa tupu ogwugwu, na-emekwa ka ọ bụla o kwere omume iji rụchaa ha nkwa. A ọgaranya njikọ bụ eziokwu na folks akwụsịla ha na-akpakọrịta na-agba mbọ iji dozie ihe, o, nwekwara mgbalị ga-enwe n'ezie si n'akụkụ abụọ.
Nkwa Day dara n'elu 11 February. Nkwa anamde a akụkụ dị oké mkpa na ihe mmekọrịta na-emezu ná nkwa bụ gị 2nd ihe kacha mkpa iji nweta ezi mmekọrịta. Na-eme ka nnukwu nkwa agaghị kọwaa gị onwe gị na mmekọrịta ma na-emezu ihe ndị a na ufiop nraranye na-edebekwa obi ike agbanwe obibi bụ oké egwu. N'ihi ya na-adịghị kwere ihe gaba elu tupu na-eme ka nkwa a ịhụnanya na, ị ga-egosi na nraranye na ịnọgide na-enwe ha nwee obi ụtọ ofụri oge nke ha ndụ.
Nkwa mfe ike ma siri ike na-. Ọ ka mma ime ka nkwa Otú ọ dị anyị nwere ịbụ ndị bara uru na-ekwupụta anyị hụrụ ha n'anya ka a hụrụ n'anya na ebe nke ịkpata nkwa. ma, e nwere onye ọ bụla ụbọchị ghọtara dị ka nkwa ụbọchị na izu ụbọchị nke Ɛpo. Si otú ahụ mepụta nkwa a nkwa ụbọchị Otú ọ dị na-agaghị emezu na tupu ndị na-eme ka njikọ gị gbasiri.
Obi ụtọ na-amakụ Day 2018:
obi ụtọ amakụ ụbọchị
Amakụ ụbọchị okwu banyere iji ọṅụ site amakụ gị na-akpachi anya na ndị a hụrụ n'anya . Ọ bụghị nanị ndị a hụrụ n'anya dị ka ọ bụ nanị hugs na ike brighten a ụbọchị.
Kwa ụbọchị na-adakwasị 12th February Ọtụtụ n'ime ndị a na-eto eto ga-obi ụtọ na a ụbọchị na-arụrụ ya. Nke a ụbọchị enyem otu na a bara uru ohere na-ekwu na ihe emeghi agwụcha ịhụnanya na ịhụnanya ha na a esika na-ekpo ọkụ nsusu ọnụ.
Around mmakọ ụbọchị ndị mmekọ akwado eachother. Ha ntụrụndụ onwe ha onye ọ bụla ọzọ ogwe aka. The ịhụnanya na nkasi obi ha kweere na nke a ahụkebe oge bụ oké ọnụ ahịa. Ha kechie eachother otú uko n'ihi na ọ bụrụ na ya na ezigbo mkpa oge ná ndụ ha nke mere na ha n'ezie adịghị ihe eachother ịgbahapụ.
Amakụ otu o ọzọ na-enye nkasi obi, ọ enwekwu ịhụnanya. Ya bụghị naanị banyere iri abụọ na ise ụbọchị. Ozugbo ị hụrụ n'anya na-enweghị obi ụtọ, nanị jide ha na-enye ha a uko nsusu ọnụ. Ọ na-aga n'ezie duru ha na-eche nnọọ mma. Amakụ enye a mmetụta na ị bụghị naanị. Ọ na-akụziri na m n'ebe ị. Ọ na-egosipụta nchegbu. Ọ na-egosi na, o tricky ọnọdụ bụ, 'Ị na-mgbe na-aga iji nweta m azụ'.
Obi ụtọ na Kiss ụbọchị 2018:
obi ụtọ nsusu ọnụ ụbọchị 2018
Kiss Day tụlee on February 13, nke a bụ otu onye n'ime otu nke ajọ kasị ịtụnanya ụbọchị a Valentine izu. Na nke a ụbọchị ndị hụrụ nweta onwe gị a ọlaedo ohere ịkọrọ ha ịhụnanya site n'inye a omiiko nsusu ọnụ ka ha Ɛpo. Karịsịa Kiss na brow bụ n'ezie a ihe ịrịba ama nke na-elekọta ma na-eme. Nwalee a siri okwu ịhụnanya ịgbanwe nke a ụbọchị n'ime a na-akpachi anya na-agaghị echefu echefu otu.
On nsusu ọnụ ụbọchị ndị mmekọ susuo eachother. Nke a ụbọchị anọwo na-eleghị anya na-ọwọrọiso ụbọchị na ha na-ele. Cheta na kpọmkwem ụbọchị. Isusu ọnụ bụ gị kasị mara ezigbo mma ogbugbu na-ekwu love.Kissing ndị ị hụrụ n'anya na-enye nnukwu mma mmetụta. Nke a bụ ihe pụrụ iche si otú a ụbọchị ọbụna ihe pụrụ iche na ndị a hụrụ n'anya.
Kiss kacha aru ụdị si gosi ịhụnanya. Ọ bụ omume na ị na-ekwu ịhụnanya na ọtụtụ iri puku ụzọ o, ndị kasị mma ụdị okwu bụ ọnụ. Ị ga-ahụ pụrụ iche ụdị nsusu ọnụ gụnyere dị ka Christmas nsusu ọnụ, egbugbere ọnụ na egbugbere ọnụ ọnụ, susuo na brow.
Obi ụtọ na Valentines Day 2018:
Ikpeazụ, ma na-bụghị ntakiri Ɛpo Day tụlee n'elu February 14, nke a bụ otu onye n'ime otu n'ime ndị zuru kasị pụrụ iche ụbọchị n'ihi ọtụtụ ndị na ndị mmadụ gburugburu ụwa, ndị kasị afọ ọmụmụ usọrọ nke a ọmarịcha ụbọchị a na-akpọ Ụbọchị Valentine.
E nwere naanị a mmasị na-ekwu na "Unu chere ruo mgbe ọ bụ akaha na-eso onye dị nnọọ otú ihe ị n'anya n'ezie ha, otú ihe ị na-eche ka ndị a. Ebe ọ bụ na ha na-arahụ Otú ọ dị n'oké olu gị iti mkpu ma tie mkpu, ha ga-aza unu ọzọ. "Nke a ụbọchị esetịpụ ọtụtụ mkpa ọtụtụ ole na ole na-adịru ndụ. Ya mere itinye a dum ụbọchị na gị hụrụ n'anya, aga n'ihi na mealsand n'anya a film gaba maka ruo ogologo oge na-agba ịnyịnya na ike a na ụbọchị a echefu echefu otu.
E nwere abụghị ihe ọ bụla ọbìa mmetụta tụnyere ịhụnanya. Mgbe na-ekere òkè na ya. N'anya dị ọcha mkpụrụ obi. chọta nkwa, nweta obi ike, ikwu gị ịhụnanya.
Ị nwere ike ịchọta a ukwuu nke ndị ikom na ndị inyom bụ ndị na-na na malitere kpọrọ ịhụnanya dị ka nke ụfọdụ na-ekwesịghị ịdị ikom na ụmụ agbọghọ na ha niile mezuru. Kwesịrị ị na-ada na ịhụnanya na onye ọ bụla dị ka nke a, -enye ha oge ha, nweta obi ike, mgbe kwe ha ka ha nweta obi ike na ịhụnanya, ike ha na-aghọta na onye ọ bụla bụghị kpọmkwem kpọmkwem otu. The oge na ị na-aghọta nke ọma na inweta obi youpersonally, -ahụ na-na-na ị dịghị emerụ ha isi. Adịghị ekpebiri ha ihe nile, -anwa ịghọta ha dị ka nanị na nke a ga-enye mmeri gị ịhụnanya.
'Ụbọchị Valentine'Bụ a n'ezie ụbọchị pụrụ iche maka ndị ikom na ndị inyom na ịhụnanya. Ọ bụrụ na onye nke ị na-atụ aro na-ewe gị uru mgbe ọ na-enyo nnọọ otu ụbọchị gị. Mesịa mgbe ị na-na a mmekọrịta ma ọ bụrụ na ihe na-aga na-ezighị ezi mgbe ahụ na-n'uche nke a ụbọchị mgbe ị na-amasị otú obi ụtọ. Onye ọ bụla mmekọrita nwere lee njem, ịlụ ọgụ, anya mmiri, na ọṅụ, obi nkoropụ, obi ụtọ, Ikuku. Ma ka na-adịghị akwụsị agbalị. Anọgide na-na-arụ gị mma iji chọọ ihe n'èzí e. Ọ ga-ekwe mgbe nile ka mmekọrịta gị iji nwetara ike.
Ọ bụrụ na mwute, bụrụ na ị na ebịne ojuju na uru, mgbe na-adịghị na-ewe iwe. Onye ọ bụla nwere ha nnọọ onwe mgbanwe nke nhọrọ. Ị na-na na na-eche na-ekwe ka ndị a na naanị anabata gị amaghị na, o ha na bụghị ikweta ya mgbe nanị ka ọ na-aga.
Na n'elu isiokwu, anyị nyere gị zuru ezu Ama banyere Ɛpo izu 2018 na mbara uru nke ụbọchị ọ bụla nke Ɛpo izu. Anyị na-enye ihe kasị mma kwesịrị ekwesị njikọ maka ụbọchị ọ bụla oyiyi, efu, ozi na-ekele, SMS. Ọ bụrụ na ị na-enwe isiokwu a biko ịkọrọ na ndị enyi gị na-enwe ụbọchị Valentine 2018 na ịhụnanya na-atọ ụtọ.
Agwụcha a mara mma post na ihe ịtụnanya okwu na "mgbe na-echere ezigbo oge na-agwa onye na ị hụrụ ha n'anya na-akpata oge maka onye ọ bụla, na-eme ya ugbu a. "Ya mere, ekwe ka nke a Ɛpo Day-enye gị ike na-atụle gị ukwuu mmetụta na ị nwetara a 1 ka onye ahu kweere na i nwere ike na-enweghị. N'ịchọ onye ọ bụla a nnọọ ụtọ na Ɛpo Day 2018 n'ọdịnihu na-enwe olileanya na mmadụ niile na-achọta ha ezi mkpụrụ obi mate! N'ihi na ihe mmelite, anọ ejikọrọ!
All I Kwesịrị Iji Kwuo On Valentines Day Na 10 Infographics
Obi ụtọ na Valentines Day ịhụnanya uri oyiyi
Gwa ya na i na-ebi ndụ na verbatim nke obi ụtọ Valentines ụbọchị Cards
M gị ndo na okwu nke ike - A obi ụtọ Ɛpo ụbọchị onyinye!
Best uri of Obi ụtọ na Valentines ụbọchị Ịhụnanya 2018
Best poems maka Obi ụtọ na Valentines ụbọchị Ịhụnanya
New SMS maka Valentines ụbọchị 2018
Obi ụtọ na Ɛpo ụbọchị SMS
Obi ụtọ na Valentines Day Ịhụnanya agbajikwa obi Images
Valentine Day na akwụkwọ ahụ aja
Valentine Day kedu App Status
n'ihi na nwa klas
n'ihi na nne na nna
N'ihi Sister Na Iwu
n'ihi na Ọkpara
Obi ụtọ na Valentines Day nkwusora
Ɛpo Day mata echiche 2018